Ngabe Inkampani Yakho Yebhulogi Uma Impilo Yakho Ithembele Kuyo? | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 15, 2007 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 15, i-2017 Douglas Karr
Kunabantu abathile abacabanga ukuthi ama-blogger azingelwe phansi ezindlini zethu ezingaphansi ngamabhokisi avulekile we-pizza ne-Mountain Dew yonke indawo. Kunomunye umbono wama-blogger ongahle ungawazi. Ama-Blogger ngabantu bezenhlalo abafisa ukuxhumana (futhi kwesinye isikhathi ukunakwa!).
Namuhla, nginomhlangano omuhle ekuseni nabanye abantu abavela Ingqondo Ebukhali. Ngibe nethuba lokuxoxa ngokuhlangenwe nakho kwami ​​kubhulogi neqembu futhi nginikeze ukuqonda ngamasu wokubloga ezinkampani. Inkulumo yamukelwa kahle kakhulu futhi ngayijabulela kancane.
Into ethokozisayo ngale nkulumo ukuthi konke kwenzeke ngokubhuloga. Abantu ababekhona basukela kusolwazi oyinhloko yomnyango eBall State University kuya komele i-IT kusuka endaweni yokukhiqiza. Ngangesaba kancane - babenelukuluku lokwazi, ulwazi nolwazi futhi bezibandakanya (izingqondo ezibukhali ngempela!). Ngabe angikaze ngihlangane nalaba bantu ukube kwakungekhona ukubhuloga.
Ngaqala ukubhuloga. Ngabe sengisiza uPat Coyle ukubloga. Sobabili siqale ibhulogi evulekile yabantu base-Indianapolis ukutshela indaba yabo ukuthi kungani belithanda idolobha. UPat wahlangana noRon Brumbarger, uMongameli kanye ne-CEO ye Izixazululo zeBitwise futhi saxoxa ngokubhuloga kwami. URon uphakamisa izingqondo ze-Sharp Minds ukuhlanganisa abantu esifundeni ukuze baxoxe ngobuchwepheshe futhi bacabange ukuthi ukubhuloga kweCorporate kungaba isihloko esihle kubo ukuxoxa. Ngakho-ke uRon noPat badla nami isidlo sasemini futhi sayihlela.
Konke kusuka kubhulogi.
Kwakukhona amathuba kubo bonke ababekhona futhi amehlo abo amaningi akhanya. Abanye babhala amakhasi wamanothi. Ngabona amakhanda anqekuzisa amakhanda (mhlawumbe elinye lisuka ekuthukutheleni 😉 - akubona bonke abantu abajabulela ukubhuloga njengami). Kwakuyithuba elihle neqembu elihle labantu ukuxoxa nabo lobu buchwepheshe.
Ingxoxo enkulu ibigxile ekwesabeni izinkampani ukuthi zithathe leso sinyathelo - inkulu. Njenganoma yisiphi isinyathelo esikhulu, ukubhuloga kudinga isu kanye nemihlahlandlela ethile ngaphakathi kwenhlangano. Kwenziwe kahle, uzoqhubela inkampani yakho kanye nawe phambili njengabaholi bokucabanga embonini yakho, ube ngowokuqala kumakrofoni ezingxoxweni ezungeze umkhiqizo wakho, futhi wakhe ubuhlobo bomuntu siqu namakhasimende akho namathemba akho.
Ngicabanga ukuthi okunye esikuzwile ukuthi izinkampani zidinga ukwamukela nokwamukela ubuchwepheshe obusha kunokuba bufushwe kubo ngokwesaba. Isibonelo esisodwa kwaba Ukuvinjelwa kukaKent State kubasubathi babo ukuthumela kuFacebook. Cabanga nje uma abaphathi bebenethuba khuthaza futhi ubheke Izenzo zabasubathi ku-Facebook esikhundleni salokho. Ngeke yini lokho kube ngumthombo omuhle wokuqashwa? Ngicabanga kanjalo.
Njengoba ngangikhuluma noprofesa waseBall State, ngacabanga ukuthi kungamangalisa kanjani ukubona amabhulogi kaFreshman ku-intanethi, efundisa abafundi besikole samabanga aphezulu ngempilo yaseKolishi, ukuba kude namakhaya, kanye nokuhlangenwe nakho kwenkululeko nekolishi. Leyo ibhulogi enamandla!
Futhi, ukubhuloga kwami ​​kwangifica ku- I-Indiana Humanity Council kusihlwa lapho ngihlangane khona noRoger Williams, uMongameli we Isikhungo Sobuholi Esisukayo. URoger usebenzisa amanethiwekhi omphakathi ukuxhumanisa nokwakha imiphakathi yakhe yabaholi abasebasha esifundeni. Hewu!
Ngiphinde ngahlangana nabamele abavela Ukusiza Omakadebona Abangenamakhaya Nemindeni, inhlangano engakholeki esiza omakadebona abangenamakhaya ukuba basukume ngezinhlelo zesikhathi eside zokwelulekwa nokunakekelwa. Njengamanje banezilwane ezingama-140 ezingenamakhaya ohlelweni lwabo, ezibanikeza ukudla, indawo yokuhlala, ukubekwa emisebenzini, njll.
Uthando lwalawa angenzi nzuzo lwalumangalisa futhi ngakhuthazeka ukuthi bonke balibona kanjani ithuba kwezobuchwepheshe. Kube nokulingana okuthile phakathi kwala maqembu womabili. Iqembu lasekuseni lalinamabhizinisi aphumelelayo ayenelukuluku lobuchwepheshe obusha futhi, mhlawumbe, bekhathazeka kancane ngokuthi lezi zinselelo ezintsha zizoletha ini. Iqembu lakusihlwa lalilambele ubuchwepheshe obulandelayo obuzobaxhumanisa nabanye abantu ngokushesha nangokushesha.
Ngicabanga ukuthi lapho ibhizinisi lakho lizokonga iVet noma ukuthola ukudla okulandelayo komuntu olambile, noma yibuphi ubuchwepheshe obusizayo buhle.
Tags: izixazululo ze-bitwiseibhulogiukubhuloga ezinkampaniubuholi obusafufusaomakadebona abangenamakhayaindianapolisisimo se-kentpat coyleizingqondo ezibukhali